Tirade dhimashada kenyaatiga kulbiyow lagu laayay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Tirade dhimashada kenyaatiga kulbiyow lagu laayay.
On Jan 27, 2017 355 4
Meydadka 57 askeri oo kenyaati ah ayaa la xaqiijiyay in ay yaaliin saldhig ciidanka Kenya ku laahayeen deegaanka kulbiyow ee gobalka jubada hoose kadib markii xarakada mujaahidiint alshabaab saakay weerar ku qaaday.
Waxaa la aaminsan yahay in khasaruhu intaas ka badan yahay ha yeeshee tiradaanu waa mid horu dhac ah oo laga soo xigtay ilo xog ogaal ah.
Qaarka mid ah ciidamada Kenya ayaa u firxaday dhanka soohdin beenaadka oo aan ka fogeyn deegaanka la isku fara saaray ee kulbiyow.
In ka badan 10 gaaadiidka dagaalka ah ayaa u gacan galay xarakada mujaahidiinta alshabaab walow ay suura gal tahay in baabuurtu intaa ka badnaa karto.
Hubkii ciidamada Kenya iyo qalab kaleba waxaa milkiyay ragga dagaalka xerada ku qabsaday ee ka tirsan ciidanka Alshabaab
Weerarka saaka ayaa lagu daah furay gaari waxyaabaha qarxa lagu raray oo uu kaxeynayay mujaahid naftii hure ah kadibna askarta kale ayaa kenyaatiga dhufeysyada ugu daatay.
Intaa kadib gaadiidka ay ku rakiban yihiin qoryaha waaweyn oo ay ku jiraan kuwa lidka diyaaradaha ayaa saldhigga gudaha u soo galay waxaana la arkayay madaafiic ku hoobaneysa meela ciidanka kenaatigu gabaadka ka dhiganayeen iyo rasaasta fudud oo sidii xidigaha u ifeysa.
Inkastoo ciidanka kenya dhufeysyo adag dhisteen hadana taasi kama bad baadin geeridii iyo guul daradii ay ka baqayeen.
Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa sheegtay in weerarkan oo umuuqday mid aad loo soo qorsheeyey ay fulisay Katiibada Saalax Nabhaan.
Bishaan oo kale sanadkii hore ciidamada Kenya magaalada ceel cadde ee gobalka gedo ayaa waxaa looga laayay askar tiradooda Kenya aanay welii sheegin balse la qiyaasayo in laba boqol ku dhaw yihiin.
Kenya ayaa khasaara badan ka dhaxashay duulaanka ay gudaha soomaaliya soo gashay sanadkii 2011 laakiin weli waxay sugeysaa daruus badan hadii aanay qaadan go’aan ka duwan midkii qar iska tuurnimada ahaa ee ay horay u qaadatay.
Thanks Allah who helped the and spoiled kufara or murtadeen
Thankfully for Allah who has helped alshaabu mujaahideen and destructed to the Kenyan Christians who had planned to capture Muslims land
abdishakur says 5 years ago
Aad ayaa ugu faraxsanay jabka ku dhacay cadawga islam
mohamed ali isse says 5 years ago
allah aya mhd leh gaalada iyo daba dhilifyada waxba yaan loo reeban balse waxn ka sii jeclaan lahaa jabka amxaarada iyo tigreega tirada yar ee ku soo duulay dhulkeena.